Kibaki-Kenya | News From Somalia
Category Archives: Kibaki-Kenya
WARBIXIN DHAB KA HADAL AH:-Kismaayo iyo Igad Maxaa kala Haysta.
Dowladdaha Kenya iyo Itoobiya oo isku qarinaya magaca IGAD ayaa shir maamul loogu dhisayo Jubbooyinka iyo Gedo ka furay xarunta Jaamacadda Magaalada Kismaayo ee xarun gobaleedka Jubbada Hoose.
Shirka ayaa lahaa wajiyo badan waxaana ka qeybgalay Rag iyo Haween calooshood u shaqeystayaal ah oo laga kala keenay Magaalooyinka Adis Ababa iyo Nairobi ee caasimadaha Itoobiya iyo Kenya.
Qilaaf kii ugu xooganaa,iyo kala shaki salka ku haya awood qeybsi ayaa shantii cisho la soo dhaafay hareeyay ergo beenaadka ka qeybgalaya shirka ka socda Kismaayo.
Si kasta oo Soomaalida ula shaqeyso cadow dalkeena ku soo duulay haddana waxay yihiin dad lafaha uu ka galay qabiil iyo Nin jecleysi.
Dowladaha Kenya iyo Itoobiya ayaa u arkayay in dadka ay isagu keeneen Kismaayo ay ogolaan doonaan wax kasta oo la doonayo in laga meel mariyo laakin taasi bil caksigeedii ay dhacday oo waxaa gadood sameeyay odayaal dhuuntu ufurantahay oo jeeb weenayaal ah iyo kuwa u arkay in la liiday qabiilada ay ka soo jeedaan.
Maalmo ka hor Kismaayo waxaa soo gaaray wafuud ka socotay Kenya iyo Itoobiya oo soo xulay ergada ka qeybgalaysa doorashada Madaxweynaha Jubba Land oo hal qabiil ay ubadiyeen.
Odayaal ka soo jeeda in kabada 10 qabiil oo shirka ka qeybgalay ayaa shalay ilaa xalay ka baxay shirka iyagoo sheegay in IGAD ay wadato odayaasha ku heybta ah Axmed Madoobe.
Suldaan Cabdirashiid Axmed oo shirka ka qeybgalaya ayaa sabaax usheegay in 23 beel odayaashoodii shirka ay ka baxeen ka dib markii awood qeybsiga beelaha loo saami badiyay beesha uu ka soo jeedo Axmed madoobe kuwaasi oo helay in kabadan Boqol Ergo halka beelaha kale heleen wax kayar 20 ergo.
Xaalada ayaa kacsan waxaana lagu kala yaacay
shirar xalay iyo shalay dhacay oo Igad la yeesheen Odayaasha shirka ka baxay kuwaasi oo xitaa badankooda la isku dayay in lacag jeebka loo galiyo.
Dowladda Xasan Sheekh ayaa dhawaan ka qeybgashay shir ka dhacay Adis Ababa iyagoo sheegay in guuli weyn ay kala soo laabteen shirka islamarkaana talada shirka Kismaayo lagu soo wareejin doono Dowladda oo IGAD faraha kala baxayso.
Dad badan ayaa iswey diin kara aaway guushii? Meeyay shirkii lagu soo wareejinayay Dowladda? Maxay wali IGAD faraha ula jirtaa shirka Kismaayo?
Cabdiraxmaan Ragge”Haddii Saddex Kun laga Dilay Amisom imisa Kun ayay ku xasuuqeen Muqdisho,Maxaa looga hadli waayay”(Dhagayso)May 12, 2013
Axmed Cabdi Cumar oo ahaa Gudoomiyihii Jubbada Hoose Dowladii Cabdullaahi Yuusuf marna loo magacaabay Gudoomiyaha Kismaayo ayaa wareysi uu siiyay Idaacada islaamiga ah Alfurqaan kaga hadlay ismarin waaga ka taagan Magaalada Kismaayo oo uu ka socda shir Kenya wadato oo ay ku dhiseyso maamul iyada hoostaga.
Axmed Cabdi Cumar ayaa sheegay shirka Kismaayo ka socda inuu yahay mid xaaraan oo aysan udhameyn qabaailka dega Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo.
“Kismaayo waxaa dega dhowr qabiil haatan dadka kaqeybgalaya shirka Kismaayo ma ahan dadkii la yaqiinay ee Kismaayo waa dad Kenya wadato oo meelo kale ka keentay”ayuu yiri Axmed Cabdi oo loo yaqaan Axmed Sandheere.
Gudoomiyihii Jubbada Hoose ee DowladiiCabdullaahi Yuusuf ayaa sheegay in haatan Gumaysi uu kujiiro Jubbooyinka lana hoosgeeyay degmooyinka ay gumaysato Kenya.
“Kenya Soomaaliya ayay soo gashay dagaalkii ay wadayna waxa uu kusoo dhamaaday Kismaayo meelna kagama bixin ujeedkooduna waa qeyraadka dakada iyo garoonka iyo shidaal”ayuu yiri Axmed Sandheere.
Dowladda ayuu sheegay haddii arinkaan ka aloolsan Kismaayo wax ka qaban Weydo in talo gacanteeda ka baxday.
Dhageyso Codka Axmed Cabdi Cumar Gudoomiyihii Gobalka Jubadda Hoose Dowladii Cabdullaahi Yuusuf .lite
Website’yada Soomaalida qaar kamida ayaa waxaa kasoo dhexbooday ka soo muuqday Haweenay Magaceeda ku sheegtay, Faadumo Bare Ugaas!.
Waxaan ogayn Maxamed Ibraahim Shakuul oo Wadaaddada Al-Ictisaam ay u dirsadeen Kismaayo, waatuu isku sharaxay Madaxweynanimada Jubbland, Axmed Madoobe iyo C/naasir Seeraar Wadaaddadii Al-Ictisaam markii ay u diideen Lacagtii ay Codsadeen waxay ku direen Shakuul Odayaashii beesha, waxayba dheheen waa Al shabaab oo Sheekh Umal ayaa soo dirsaday iyo Shibile!
Hadda Dumarkii ayaa gaaladii waxay leeyihiin si aad Cod ka sareeya kan Shakuul aad u heshaan Wadaaddada aan Dadka u tusno cid doonaysa in aysan jirin Fadlan Madaxweyne isku sharax.
Wadaaddadii Al-Ictisaam meelkasta waa ku bahdilan yihiin, waxaa loo qaatay halka Malyan ee Axmed Madoobe Codsaday in ay siiyaan oo Shakuul ka taageeraan Qurbaha.
Waxaa naloo sheegay xattaa Xaflad Shakuul Nairobi loogu dhigi lahaa in ay diideen Wadaaddo kasoo jeeda Jigjigland oo Axmed Madoobe taageersan, Al-Ictisaamku ma’ahan niman Siyaasadda Soomaaliya fahmay, waa kaas Bashir Salaad Asaga oo Villa Somalia jooga waayey Xildhibaan iyo Wasiir, halka Islaaxa iyo Suufiyadu ay ka helaan Xildhibaano iyo Wasiiro oo xattaa ay Ciidan ku haystaan Gobolka Gedo iyo Galgaduud.
Al-Ictisaam Sacaboolay waxaa loo qaatay in ay dib ula midoobaan Xarakada Al shabaab Almujaahidiin, xattaa Faroole wuxuu u diiday in ay Ciidan samaystaan Al-Ictisaamku, waxaa naloo sheegay Maalin kuwo Boosaaso jooga oo Jawaasiis ah ay Gaari Masaajidka Rowda yaala qarxiyeen in Faroole yiri, xattaa Al shabaab kama hadli kartaan Qabylaada iyo Arimaha Bulshada ka hadla haddii kale waan idin xirayaa ama ku laabta meeshii aad ka timaadeen Amniga Boosaaso dooni maayo in aad wax u dhintaan!.
Axmed C/samad ayaa ka Caqli badan markuu Arkay Faroole in uu dantiisa kaliya wato wuxuu ku biiray Al-Islaaxa Muqdisho oo halkaas ayaa Hotel Jaziira lagu waardiyeeyaa, Asaga oo Sirdoonka Nuur Baaruud magan u ah, halka Fu’aad Aflowna u Qaxay Uganda iyo Kenya.
Dhagayso Faadumo Bare Ugaas MP3 Halkaan Riix Ama Guji
WARKA QAARKIIS WAXAAN KA SOO XIGANAY SOMALIMIDNIMO.
Gumaysiga iyo Gayiga Somaliyeed Dr Saadaq Enow.